Tsangambaton'ny lova 20 eto Espana (II) | Vaovao momba ny dia
Roa andro lasa izay dia nilaza taminay izahay hoe inona ny hafa folo Tsangambaton'ny vakoka manerantany any Espana. Ny marina dia afaka milaza aho fa efa nitsidika olona vitsivitsy ary mipetraka eo akaikin'ny sasany ihany koa aho, saingy misy ny hafa izay tsy fantatro ary tsy fantatro fa anisan'ity sokajy UNESCO ity izy ireo.
Androany dia holazainay aminao hoe inona ireo tsangambato folo hafa, fa ny marina dia miresaka vitsivitsy fotsiny isika, satria i Espana dia manana Tsangambato 44 izay efa vakoka manerantany. Raha ny marina, izy no firenena fahatelo manana tsangambato be indrindra nambara, taorian'ny Italia sy Sina, ka tsy maintsy ankasitrahantsika koa izay ananantsika akaiky ny trano.
1 Tanànan'i Cuenca voaro mafy
2 Lugo rindrina
3 Toerana arkeolojika an'i Mérida
4 Valan-javaboary voajanahary
5 Tower of Hercules
6 Ny monasiteran'ny El Escorial
8 Toerana arkeolojika an'ny Tarraco
9 Lapan'ny mozika Catalan
Tanànan'i Cuenca voaro mafy
Ity tanàna ity dia nahavita nitahiry ny tontolo fahagola taloha, ary manana ody maro izy. Ny katedraly, izay no voalohany tamin'ny fomba Gothic natsangana tany Espana, ny tetezana San Pablo na ny sisa tavela amin'ny tranon'ny taonjato faha-XNUMX. Fa raha misy zavatra mahasarika mpitsidika bebe kokoa isan-taona dia io no malaza trano mihantona amin'ny harambato. Mijery eo ambonin'ny hantsam-dranon'ny reniranon'i Huécar izy ireo miaraka amin'ny lavarangana cantilever izay mahaliana ny mpizahatany rehetra mandalo.
Izany no rindrina niaviany romana izay manodidina ny tanànan'i Lugo, farafaharatsiny ao afovoany manan-tantara. Izy io dia natsangana tamin'ny andron'ny Emperora Augustus, tamin'ny 13 talohan'i Kristy. C., ary nandia fanavaozana vitsivitsy hatramin'izao. Raha te hanana fomba fijery mahaliana momba ny tanàna isika, tsy misy tsara noho ny mandeha eo amin'ny rindrina eo an-tampony, tokony ho roa kilometatra ny halavany, mankafy ny fomba fijerin'ny tanàna taloha.
Toerana arkeolojika an'i Mérida
Ao amin'ny tanànan'ny Mérida dia afaka mahita be dia be isika vestiges tamin'ny andron'ny romana any amin'ny Saikinosy. Iray amin'ireo tsangambato mahaliana indrindra ny Teatra. Niorina tamin'ny Emperora Augustus, ity zanatany romana ity dia renivohi-paritany Lusitania. Betsaka ny zavatra azo jerena, toy ny Roman Bridge, ny Tempolin'i Diana, ny Arch of Trajan na ny Aqueduct of Miracles.
Io no faritra avo indrindra amin'ny nosy Tenerife, ary ny zaridaina voajanahary tranainy indrindra ao amin'ny nosy Canary. Any amin'ny volkano Teide no misy azy, ary eo ianao dia afaka misaintsaina ny volkano mahatalanjona mahatalanjona ary mitondra ny tariby mankany an-tampony. Raha vantany vao tonga any amin'ny alàlan'ny fiara tariby ianao, dia misy fahitana mahavariana, saingy mbola misy lalana iray hafa, izay tsy maintsy angatahinao mialoha mba hamelany anao hanao izany, hahatratra ny tampon'ny volkano. Ilaina foana ny fitsidihana azy raha mandeha any Tenerife ianao.
Ity iray ity Ny tilikambo sy jiro dia ao amin'ny tanànan'ny A Coruña, miorina eo an-tampon'ny havoana iray. Io ihany no jiro romanina eran'izao tontolo izao sy ny tranainy indrindra miasa hatramin'ny nanombohan'ny taonjato voalohany. Raha ny mahazatra dia afaka miditra ao anatiny ianao, saingy tsy misy zavatra hafa ary tsy misy hafa noho ny dingana 234 hahatratra ny faritra avo indrindra. Ny milaza fa tsy ny tsangambato ihany no zavatra tsara tarehy, fa koa ny fomba fijerin'ny ranomasina sy ny tranokala.
Ny monasiteran'ny El Escorial
Miorina ao amin'ny Community of Madrid, izy dia tena izy sarotra izay nasain'i Filipo II namboarina. Anisan'izany ny lapan'ny mpanjaka, ny basilika, ny monasiteran'ny, pantheon ary tranomboky manana sanganasa maherin'ny 40.000. Fonenan'ny fianakavian'ny mpanjaka espaniola izy io ary onenin'ny frera ao amin'ny Order of San Agustín ankehitriny.
Nolazaina fa valan-javaboary iray tamin'ny 1981, faritra arovana izy io maherin'ny 10% amin'ny nosy La Gomera. Nambara izany noho izany satria mitahiry ny ala laurel tsara indrindra sy lehibe indrindra izy, ala mando izay nibodo ny ampahany lehibe tany Eropa tamin'ny vanim-potoana fahatelo. Ny 'Roque de Agando' dia iray amin'ireo marika, vato lehibe. Ary manana karazana flora mihoatra ny 200 koa izy ireo.
Toerana arkeolojika an'ny Tarraco
Ity no fametrahana voalohany ny Romana ao amin'ny saikinosy, any Tarragona, antsoina hoe Tarraco taloha. Izy io dia tranonkala arkeolojika izay tavela amin'ny rindrina taloha hatramin'ny 218 talohan'i Kristy. C., ary misy amphiteater mahavariana ihany koa, miaraka amin'ny fahafaha-manaon'ny olona an'arivony amin'ny fotoanany. Misy ihany koa ny teatra sy ny sirkus romana. Safidy tsara ho an'ireo izay maniry toerana misy tantara maro, toa an'i Mérida.
Lapan'ny mozika Catalan
Fantatra amin'ny anarana hoe Palau de la Música, any Barcelona. Asan'ny mpanao mari-trano Lluís Domènech i Montaner tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanjary trano maoderina tandindona izy io. Tsara tarehy miavaka ny ao anatiny, ary tsy misy mahatohitra ny fakana sary an'arivony ny firafiny, ny pitsopitsony ary ny fitaratra. Hatramin'izao dia mbola iray amin'ireo efitrano fampisehoana lehibe manerantany.
Atapuerca dia nitarika revolisiona fahalalana momba ny fivoaran'ny zanak'olombelona, ​​ary any Burgos no misy azy. Ilay paleontolojista Emiliano Aguirre dia nahita taolam-paty an'ny Homo mpialoha lalana ary Homo heidelbergensis, izay nanampy azy ireo hamantatra ny tantaran'ny fivoaran'ny zanak'olombelona mandraka androany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Tsangambaton'ny lova 20 eto Espana (II)